အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Hepatitis B vaccine)သည် အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေး၏ ပထမအကြိမ်ကို မွေးကင်းစကလေးအား မွေးပြီးပြီးချင်း (၂၄)နာရီအတွင်းတွင် ပေးရပြီး နောက်ထပ်(၂)ကြိမ် သို့မဟုတ် (၃)ကြိမ်ထပ်ပေးရသည်။ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေသူများဖြစ်သည့် အိတ်ချ်အိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး (HIV)/ ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ (AIDS) ကူးစက်ခံနေရသောသူများနှင့် လမစေ့ပဲမွေးသောကလေးများကိုပါ ဤကာကွယ်ဆေး ပေးသင့်သည်။ ကျန်းမာနေသောလူများတွင် ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းဖြင့် (၉၅)ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်လူများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေများသောလူများတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပါက အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ၊မရှိကို သွေးစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သေချာအောင်စမ်းသပ်သင့်သည်။ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေသူများတွင် ထပ်ဆင့်ထိုးရန် လိုအပ်တတ်သော်လည်း လူအများစုတွင် လိုအပ်လေ့မရှိပါ။ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီရောဂါပိုးနှင့်ထိတွေ့ပြီး ခုခံအားမရှိသူများကို ဤကာကွယ်ဆေးနှင့်အတူ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီရောဂါပိုးကို ခုခံပေးသော ပဋိပစ္စည်း(hepatitis B immune globulin)ကိုပါ ပေးရသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ကြွက်သားထဲသို့ ထိုးနှံရသည်။
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီရောဂါကာကွယ်ဆေးကြောင့် ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လေ့မရှိပါ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာကျဉ်ခြင်းဖြစ်တတ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်နှင့် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးနေစဉ်တွင် စိတ်ချစွာ ပေးနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကြောင့် ဂီလန်ဘာရေး ရောဂါလက္ခဏာစု(Guillain-Barre syndrome) မဖြစ်နိုင်ပါ။ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ကာကွယ်ဆေးမှာ မျိုးရိုးဗီဇများကို ပေါင်းစပ်ထားသောနည်းလမ်း(recombinant DNA techniques)ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို သီးသန့်ဆေးအဖြစ်နှင့် အခြားကာကွယ်ဆေးများဖြင့် ရောစပ်ထားသောဆေးအနေဖြင့်ပါ ရရှိနိုင်သည်။
ပထမဆုံး အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီရောဂါကာကွယ်ဆေးကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် (၁၉၈၁)ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ (၁၉၈၆)ခုနှစ်တွင် ပို၍စိတ်ချရသော အမျိုးအစားကို ဈေးကွက်တွင်ရရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် ဤဆေးတစ်လုံး၏ လက်ကားဈေးမှာ (ဝ.၅၈-၁၃.၂၀) ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် (၅၀-၁၀ဝ) ဒေါ်လာခန့်ပေးရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ "Hepatitis B vaccines WHO position paper" (2 Oct 2009). Weekly epidemiological record 40 (84): 405–420.
↑ Moticka၊ Edward။ A Historical Perspective on Evidence-Based Immunology။ p. 336။ ISBN 9780123983756။
↑ Vaccine, Hepatitis B။6December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသည်းရောင်အသားဝါ_ဘီရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=510641" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။